ओलीको अभिव्यक्तिप्रति किन आपत्ति ? | DNFMEDIA
ओलीको अभिव्यक्तिप्रति किन आपत्ति ?
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भएका छन् ।
ओलीपक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताले सम्बोधन ऐतिहासिक भएको भन्दै सर्वत्र प्रशंसा गरेका छन् भने सचेत नागरिकले ओलीको बोली त्यो हदसम्म गिर्नु हुँदैनथ्यो भनेर आलोचना गरेका छन् । उनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिनुको सट्टा आलोचनामात्र गरिरहे । आफू सत्ताबाट हट्छु भन्ने नसोचेका उनले सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते दिएको परमादेशको पनि विरोध गरे । उनले परमादेश जनताको पक्षमा नआएकोले यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले पटकपटक परमादेशको सरकार भन्दै व्यङ्यसमेत गरे । उनले सर्वोच्चले जनादेशको विपरीत निर्णय गरेकाले मान्न बाध्य नहुनेसमेत चेतावनी दिए । ओलीले सर्वोच्च अदालतले विश्वका कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री बनाएकाले आफूलाई यो सम्झँदा अचम्म लागेको बताए । उनले अन्य देशमा कहीँ नभएजस्तो संविधान मिचेर दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेको चाहिँ भनेनन् ।
ओलीले गठबन्धनको सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य र कार्यक्रम समेत नभएको टिप्पणी गरे । उनले देउवा सरकारलाई रहेको बाँकी १६–१७ महिनाको कार्यकाल पनि बधाई र शुभकामनामै बित्ने समेत ठोकुवा गरे । उनले देउवालाई झस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री भएको र अबको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी ठूलो हुने र आफू मूलढोकाबाट नै आएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बताए । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई साउन ३ गते मतदान गर्ने एमालेका २२ जना सांसदतर्फ लक्षित गर्दै भने ‘उहाँहरुलाई मन्त्री बनाइदिनुस्, कुदिरहेका छन् किन ढिलो गरेको, जे पर्छ म सहँुला ।’ देउवालाई एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । ओलीले संविधान स्विकार्ने भन्दै आफूले गरेका सबै काम संविधानसम्मत भएको दाबी गरे ।
ओली ४० महिना २५ दिनपछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् । धेरैले उनको अभिव्यक्तिलाई सरकारबाट बिदा हुनुको कुण्ठाको रुपमा लिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न प्रश्न उठाएर यसबारे सरकारको धारणा के छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले आफूले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर राम्रो काम गरेको भए पनि त्यसलाई थप टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको चर्चा गरे । उनले सत्ता पक्षमा उन्माद आएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा धैर्य भएर सुनिरहेका थिए । ओलीले सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सरकारको गतिविधिप्रति कटाक्ष गरेका थिए । उनले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनकै गुटका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
Previous: लायन्सको मेघा ट्रि प्लान्टेसन कार्यक्रम सम्पन्त्र
Next: स्याङ्जाका काँग्रेसीले काठमाडौंमा के भने ?